महिलाहरु कुन समय बढी उ,त्ते,जित हुन्छन् ? – List Khabar
Home / रोचक / महिलाहरु कुन समय बढी उ,त्ते,जित हुन्छन् ?
admin August 15, 2021 रोचक Leaveacomment 356 Views
काठमाडौं । यौ,न एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया हो । महिला पुरुष दुवैलाई यौ,न चाहन्छि । अझ भन्नुपर्दा महिलालाई बढीमात्रामा यौ,न चाहना हुन्छ । तर महिलाहरुलाई यौ,न चाहना कहिले महसुस हुन्छ त्यो थाहा पाउन मुस्किल हुन्छ ।
उनीहरु पुरुषहरु जस्तै खुलेर यौ,नको लागि बोलावट गर्दैनन् । एउटा अध्ययनका अनुसार, म,हि,नावारी पूरा भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म महिलाहरुलाई बढी यौ,न चाहना हुन्छ । यो अवधिमा महिलालाई सहवासमा बढी आनन्द आउँछ ।
जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सहभागीहरूलाई महिलासँग कुन समय यौ,नसम्बन्ध राख्दा उनीहरूलाई बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो ।
यौ,न विशेषज्ञहरूका अनुसार, म,हि,ना,वारी पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौ,नको ‘मुड’ मा बढी हुन्छ । महिनावारी पूरा भएपछि यौ,नका लागि उत्ते,जित गर्ने हा,र्मोन सक्रिय हुन्छ ।
अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने सहवासले बढी रमाइलो अनुभूति दिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म ग,र्भा,धारणको सम्भावना बढ्छ ।
यसैले यस अवधिमा सम्पर्कको तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ । त्यो सर्वेक्षणमा युवतीहरूले म,हिना,वारीपछिका तीन दिन पूर्ण यौ,ना,नन्दको चाहना राख्ने गरेको बताए ।
उनीहरूका अनुसार, त्यो बेला पाइने यौ,नानन्द अन्य दिनको दाँजोमा निकै सुखद, आह्लादक हुन्छ । अध्ययनमा के पनि पाइयो भने, महिनैपिच्छे तीन दिन गरिने सहवासले वैवाहिक जीवनलाई बढी रमाइलो बनाउने रहेछ ।
Previous आलुको बोक्रा फ्याल्नेले पक्कै यो पढेका छैनन्
Next यदी तपाईले राती सपनामा यी १० चीज देख्नुभयो भने हुनसक्छ यस्तो भयानक संकेत!